Tora mukana wekutengesa kwePikolinos, mari mukunyaradza | Bezzia
Maria vazquez | 12/01/2022 18:00 | Shangu
Kutengesa mukana mukuru we tenga shangu dzemhando. Ivo chaizvoizvo a mukana wakanaka kwazvo kuwana zvese izvo zvinyorwa izvo pamutengo wazvo wepakutanga zvinotiza muhomwe yedu. Uye kana zvasvika kune fashoni, zvipfeko zvekunze neshangu zvinowanzogara munzvimbo idzodzo. Ndokusaka tichitenda kuti iwe uchada kuwana iyo Pikolinos kutengesa.
Pikolinos ikambani yekuSpain iyo yakazvipira kune chokwadi, kunaka uye kunyaradza. Iyo femu yatine chokwadi chekuti mese muchaziva uye iyo parizvino inopa kusvika ku30% kuderedzwa pakuunganidzwa kwayo. Kudzikisira kutariswa kwakapihwa kunaka uye kusimba kweshangu dzako.
Kupfuura kunyaradzwa kwavo uye kugara kwenguva refu, isu isu tinogara kuchamhembe kwepeninsula tinoona bhutsu dzavo uye bhutsu dzemakumbo semhinduro yakanaka kune. kurwisa kutonhora nemvura. Uye kwete, hakusi kushambadzira, ndicho chiitiko chedu. Ndosaka tichitenda kuti zvinonakidza kugoverana newe zvimwe zvezvavanoda zvakanyanya.
1 Bhutsu dzemakumbo
2 Flat uye shangu dzemitambo
ari mabhoti ehalf round ankle, Yakagadzirwa nematehwe, inova shamwari yakanaka yezuva nezuva muchando. Kuenda kuhofisi, kubuda kunonwa ... iwo Vícar modhi ine elastic pamativi uye Aspe ine lace-up kugadzirisa uye zipi padivi.Uchavada! Yayo yakavharidzirwa yemukati chete inoumba zvakakwana kune silhouette yetsoka uye iyo isina-inotsvedza yega inopa iyo yakakwana grip yaunoda kufamba wakachengeteka.
Mienzaniso yakataurwa vane discount ye30% Kufanana nemuenzaniso wePompeya, bhutsu yepamusoro-heeled yakanakira kutaridzika kwako kwakanyanya iyo ichakushamisa iwe nekunyaradza kwayo. Uye 30% inorevei mumabhoti aya? Kuti mutengo wayo unodonha kubva ku120-140 kusvika € 80-97.
Flat uye shangu dzemitambo
Kana iwe uchida kukoshesa kunyaradza kwako uye kubheja pa shangu dzemitambo Mazuva ese, iwe unowana akawanda sarudzo mukutengesa kwePikolinos kuti uvandudze shangu dzako. Iine mitsetse yakareruka uye inochinjika, iyo Cantabria kana Sella mota dzemitambo dzinova imwe nzira huru. Ose ari maviri ane Ultralight chunky chete yakanakira kufamba dhorobha.
Iwe unogona zvakare kubheja shangu dzakanaka dzematehwe zuva nezuva, rakanaka uye rakasiyana-siyana. Mune dema, ngamera kana burgundy uye nemaketeni ayo achakubvumidza kuti uzvigadzirise kutsoka dzako zvese zvaunoda, hauzovabvisa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Shangu » Tora mukana wekutengesa kwePikolinos, mari mukunyaradza
Zvinoonekwa nemhuka dzako usati wazviziva